Monday June 25, 2018 - 09:43:40 in Wararka by Super Admin
Erdogaan ayaa xulufo siyaasadeed la ah Russia iyo Iran
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxtinimada wadankaas ayaa ku dhawaaqay in 53% codadkii ladhiibtay uu ku guuleystay Rajeb Dayid Erdogaan oo ah madaxweynaha Turkiga.
Wakaaladda wararka Al-anaadool ayaa sheegtay in Ninka latartamayay Erdogaan uu helay codadka 28% balse xisbiga isku tagga mucaaradka ayaa helay 32% inkasta oo aysan laheyn musharax si gaar ah ugu tartamayay.
Dabaal degyo ay dhigayaan taageerayaasha Erdogaan ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn sida Istanbul,Anqara iyo Izmiir.
Hoggaamiyaasha wadamada caalamka ayaa dhammaallo hambalya ah udiray Erdogaan guusha uu ka gaaray doorashooyinka madaxtinimada, Ninka guuleystay oo telefeshinka dowladda ka hadlay ayaa shacabka Turkiga uga mahad celiyay sida ay markale dib ugusoo doorteen.
oorashadan madaxtinimo ayaa ayaa imaanaysa waqti xasara siyaasadeed ay lugta lagashay dowladdda Turkiga kadib markii ay ku lug lahaatay dagaalka Suuriya ka holcaya sidoo kale dhaqaalaha Turkiga ayaa hoos uhac ballaaran laga dareemayaa waxaana hoos udhac ballaaran uu ku yimid lacagta maxalliga Liiraha.